HTC One A9၊ MWC တွင်ပထမဆုံးတွေ့ကြုံမှုများ | Androidsis
Alfonso က de Frutos | | HTC က, UHI, reviews
HTC က ခဲ့ Mobile World Congress ၏ဤစာစောင်တွင်ပါ ၀ င်မှုမရှိခြင်း။ ထိုင်ဝမ်မှထုတ်လုပ်သူကမျှော်လင့်ထားသည့် HTC One M10 ကိုပြသခြင်းမပြုပါ ငါတို့သည်အခြားယိုစိမ့်မြင်ကြပြီ.
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ရန်အခွင့်အလမ်းကိုယူကြပြီ HTC One A9 ကိုစစ်ဆေးပါသုံးစွဲသူအများစု၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည့်ကောင်းမွန်သောအချောသပ်မှုနှင့်အင်္ဂါရပ်များပါရှိသောဖုန်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ် ဦး ကိုလက်လွတ်မထားပါနဲ့ဗီဒီယိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။
HTC One ၏နည်းပညာဆိုင်ရာလက္ခဏာများ
ပုံစံ One A9
ဖန်သားပြင် ၅ လက်မအရွယ် AMOLED resolution သည် resolution5x 1080 pixels နှင့် 1920 dpi / Corning Gorilla Glass 441 တို့၏ခြစ်ရာများကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။
Processor ကို Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 Octacore (Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 နှင့် quad-core 1.2 GHz Cortex-A53)
ရမ် မော်ဒယ်ပေါ် မူတည်၍2GB အမျိုးအစား LPDDR4 သို့မဟုတ်3GB အမျိုးအစား LPDDR4
ပြည်တွင်းသိမ်းဆည်းခြင်း MicroSD မှ 16 GB အထိသိုလှောင်နိုင်သည့်ပမာဏပေါ် မူတည်၍ သိုလှောင်မှုပမာဏ 32 GB (သိုမဟုတ်) သိုလှောင်မှု 200 GB
နောက်ကင်မရာ 13 MP / aperturef/ 2.0 / autofocus / Optical image stabilization (OIS) / dual-LED flash / face detection / panorama / HDR / LED flash / geolocation / 1080p ဗီဒီယိုရိုက်ကူးနိုင်မှု 30 fps
ရှေ့ကင်မရာ UltraPixel နည်းပညာနှင့်အတူ 4MPX / aperturef/ 2.0 / 27mm / HDR / video နှင့် 1080p တွင် 30 fps နှင့်
ဆက်သွယ်မှု DualSIM Wi-Fi 802.11a/b/ g / n / dual band / Wi-Fi တိုက်ရိုက် / ဟော့စပေါ့ / Bluetooth 4.0 / FM ရေဒီယို / NFC / A-GPS / GLONASS / GSM ကြိုးများ (GSM 850/900/1800/1900) Band များ 3G (HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 -) 4G band (band2(1900) /3(1800) /4(1700/2100) /5(850) /7(2600) / 12 ( 700) / 13 (700) / 17 (700) / 29 (700))
အခြားအင်္ဂါရပ်များ Aluminum Body / Fingerprint Sensor / Accelerometer / Gyroscope / Stereo Speaker
ရှုထောင့် 145.8 70.8 7.3 မီလီမီတာ
စြေး 399 ယူရို
သငျသညျအကြှနျုပျတို့တှေ့မွငျခဲ့ကြပေမည်အဖြစ် HTC One A9 ၏ဗွီဒီယိုသုံးသပ်ချက်One မိသားစုရှိဖုန်းအသစ်သည်သင်၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့် ပို၍ ကိုက်ညီသည်။ ကောင်းမွန်သောချောချောမွေ့မွေ့ရှိသည့်အလွန်ပြီးပြည့်စုံသော terminal နှင့်သင့်ကိုရှေ့အရည်အသွေးမြင့်မားသည့်မည်သည့် multimedia content ကိုမဆိုခံစားနိုင်စေမည့်၎င်း၏ရှေ့စပီကာများအပြင်အထင်ကြီးလောက်သောဖမ်းယူမှုများပေးနိုင်သည့်ကင်မရာပါ ၀ င်သည်။
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုင်ဝမ်ထုတ်လုပ်သူကိုတင်ပြရန်စောင့်ဆိုင်းနေရသည် HTC One M10၊ HTC ကဲ့သို့သောဟဲဗီးဝိတ်ကြီးများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ရည်ရွယ်သည့်နောက်ထပ်အချက်တစ်ချက် Samsung ရဲ့ Galaxy S7 သို့မဟုတ် LG က G5.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » HTC One A9၊ MWC တွင်ပထမဆုံးတွေ့ကြုံမှုများ